Shirka musharixiinta madaxweynaha oo maanta warmurtiyeed laga soo saarayo | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Shirka musharixiinta madaxweynaha oo maanta warmurtiyeed laga soo saarayo
Shirka musharixiinta madaxweynaha oo maanta warmurtiyeed laga soo saarayo
Saacadaha soo socda ee Maanta ah ayaa waxaa la filayaa in Warmurtiyeed laga soo saaro Shirka musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay uga socday mid kamid ah Hoteelada ku yaal Magaalada Muqdisho.
Shirka musharixiinta ayaa Shantii maalmood ee uu socday waxaa ka qeyb galay, Guddoonka Baarlamaanka labada Aqal, Urrurada Bulshada rayidka, Siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobolada Waqooyi, Cullimada Soomaaliyeed iyo Madaxda Warbaahinta, waxaana ay isdhaafsadeen talooyin la xiriira Arrimaha doorashooyinka.
Afhayeenka Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Ridwaan Xersi Maxamed ayaa sheegay in musharixiinta ay aad uga doodeen, halka dalka uu ku socdo halka uu ka yimid iyo sida laga yeelayo.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Maalmihii uu Shirka socday ay isla eegeen waxyaabo badan oo uu sheegay inay ku fashilantay Dowladda Madaxweyne Farmaajo, sida wax ka qabashada Ammaanka, Dhaqaalaha, Dastuurka dalka, iyo maqaamka Muqdisho.
Ugu dambeyn Afhayeenka Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Ridwaan Xersi Maxamed waxaa uu sheegay in waxyaabihii ay ka hadlayeen maalmihii la soo dhaafay iyo Go’aankooda ay ku sheegi doonaan Warmurtiyeedka ay Maata soo saari doonaan.